မီဆိုဇိုးရစ်ခေတ် အလယ် လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း ၁၅၀-၁၆၀ ခန့်တွင် မဒါဂတ်စကားကျွန်း သည် အာဖရိကတိုက်မှ ကွဲထွက်သွားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းသည် အိန္ဒိယတိုက်နှင့် အခြားသော ဂေါဒွာနာ တိုက်ကြီးနှင့် ဆက်စပ်လျှက် ရှိနေသေးသည်။ မဒါဂတ်စကားတွင် တွေ့ရသော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများတွင် အဘယ်လီဆော နှင့် တိုင်တန်နီဆောတို့၏ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ ပါဝင်သည်။
အာဖရိကတွင် ကျွဲနွားများကို ယဉ်ပါးအောင် ပြုလုပ်ပြီး မွေးမြူခြင်းသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း မစတင်မီ မုဆိုးနှင့် ရှာဖွေစုဆောင်းသူ ယဉ်ကျေးမှု ရှိစဉ်ကတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ဘီစီ ၆၀၀၀ ခန့်ကပင် မြောက်အာဖရိကတွင် ကျွဲနွားတိရိစ္ဆာန်များကို ယဉ်ပါးအောင် ပြုလုပ်ပြီး မွေးမြူခဲ့ကြောင်း ခန့်မှန်းကြသည်။  ဆာဟာရ-နိုင်းဒေသတွင် သတ္တဝါပေါင်း မြောက်များစွာကို ယဉ်ပါးအောင် ပြုလုပ်မွေးမြူခဲ့ကြသည်မှာ မြည်းနှင့် အယ်လ်ဂျီးရီးယားမှ နျူဘီးယား အထိ တွေ့ရသော ချိုလိမ်ဆိတ်အသေးစားများလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ဘီစီ ၄၀၀၀ ခန့်တွင် ဆဟာရ ဒေသမှာ အလွန်လျှင်မြန်သောနှုန်းဖြင့် ခြောက်သွေ့လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရေကန်များ နှင့် မြစ်များ ကျုံ့ဝင်ပြီး သဲကန္တာရ အသွင်သို့ ပြောင်းလာခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် လူတို့ အခြေချ နေထိုင်နိုင်သော နေရာ လျော့နည်းလာခဲ့ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို အနောက်အာဖရိကသို့ ပြောင်းရွှေ့စေရန် အကြောင်းအချက် တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။
အစောပိုင်း ယဉ်ကျေးမှု လူ့အဖွဲ့အစည်းများ
ဘီစီ ၁၄၀၀ ခန့်မှ ဖာရိုဘုရင် ရမ်မစီ ၂၏ ရုပ်ထုများကို အီဂျစ်နိုင်ငံ အဘူဆင်ဘယ်လ်တွင် တွေ့ရပုံ
၉ ရာစုမှ ၁၈ ရာစုအတွင်း
အီဖေးပြည်မှ အိုနီ ဟုခေါ်သော ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသော ဘုရင်တစ်ယောက်က ရိုယူဘာ လူမျိုးတို့၏ တိုင်းပြည် အီဖေး (Ife) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အီဖေးပြည်သည် အာဖရိကတွင် အဓိက ဘာသာရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အချက်အခြာ ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပြီး သူ့ လက်ရာနှင့် သူ သီးသန့်ရှိနေသော ကြေးသွန်း ရုပ်ထုများကြောင့် ထင်ရှားသည်။ အီဖေး၏ ပုံစံကို အတုယူ၍ အိုယိုမှ အလာဖင်က အိုယို (Oyo) တိုင်းပြည်ကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ရိုယူဘာ လူမျိုးများ အပြင် အခြား ရိုယူဘာ မဟုတ်သော လူမျိုးများကို အိုယိုမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟိုမေး မှ ဖောင်တိုင်းပြည်သည် အိုယိုပြည်မှ အုပ်ချုပ်သော ရိုယူဘာ မဟုတ်သည့် အခြားလူမျိုးတို့၏ တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ရောင်းဝယ်မှု၏ အထွဋ်အထိပ် ကာလ
ကိုလိုနီခေတ်နှင့် အာဖရိကတဝှမ်း အပြိုင်အဆိုင်နယ်ချဲ့ကြခြင်း
ပေါ်တူဂီတို့၏ ရေမြေခြားနယ်မြေများ ဖြစ်သော ဆာဟာရတောင်ပိုင်း ရှိ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၊ ကိတ်ဗာဒီနိုင်ငံ၊ မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ၊ ဂင်းနီဘစ်ဆောနိုင်ငံ နှင့် ဆောင်တူမေးနှင့်ပရင်စီပီနိုင်ငံ တို့သည် ပေါ်တူဂီ၏ ပိုက်နက်အဖြစ် ၁၆ ရာစုမှ စ၍ ၁၉၇၅ အထိ တိုင်အောင် ရှိနေခဲ့သည်။ လစ်စဘွန်းတွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပွားပြီး အက်စ်တာဒို နိုဗို အစိုးရကို ဖြုတ်ချလိုက်ပြီးသည့် အခါတွင်မှ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့ကြသည်။ ရိုဒီးရှားသည် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း ၏ ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှ လွတ်မြောက်သော နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း မိမိသဘော ဖြင့် ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ၁၉၈၀ အထိ အသိအမှတ်ပြု မခံခဲ့ရပေ။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်မှသာလျှင် ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ အဖြစ်ဖြင့် လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့သည်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သည် အစောဆုံး လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သော နိုင်ငံများတွင် တစ်နိုင်ငံ အပါအဝင် ဖြစ်သော်လည်း ထိုနိုင်ငံရှိ လူနည်းစု လူဖြူများ၏ အသားအရောင်ခွဲခြားမှု စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေခဲ့သည်မှာ ၁၉၉၄ အထိ တိုင်အောင်ပင် ဖြစ်သည်။
အီကွေတာသည် အာဖရိကတိုက်ကို အလယ်တည့်တည့်မှ ဖြတ်သွားရုံမက အာဖရိကတစ်တိုက်လုံးနီးနီး အပူပိုင်းဇုန်တွင် ပါဝင်နေရာ ရာသီဥတု အလွန်ပူသည်။ အာဖရိကတိုက်၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသည် ကုန်းမြင့်ဖြစ်နေသဖြင့် အာဖရိက အခြားပိုင်းထက် ပို၍အေးသည်။ မြောက်ဘက်စွန်းနှင့် တောင် ဘက်စွန်း ဒေသများသည်လည်း သမပိုင်းဇုန်၌ ကျရောက် နေသဖြင့် ရာသီဥတုအေးသည်။ အီကွေတာမျဉ်း အလယ်မှ ဖြတ်သွားသဖြင့် အာဖရိကမြောက်ပိုင်းသည် ဆောင်းရာသီ ဖြစ်နေသည့်အခါ တောင်ပိုင်းသည် နွေရာသီဖြစ်၍ မြောက် ပိုင်း၌ နွေရာသီဖြစ်နေသည့်အခါ တောင်ပိုင်းတွင် ဆောင်းရာသီ ဖြစ်နေတတ်လေသည်။ အီကွေတာမျဉ်းတစ်လျှောက် ဒေသများ မှတစ်ပါး ကျန်ဒေသများတွင် မိုးအလွန်နည်းသည်။ အရှေ့ဘက် ကမ်းခြေတွင် မိုးပိုများ၍ အနောက်ဘက်သို့ ရောက်လေလေ မိုးပါးလေလေဖြစ်သည်။ အာဖရိကတိုက်၏ မိုးအများဆုံး ဒေသ များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မိုးအများဆုံးဒေသများ၌ ပါဝင်သော ဒေသအချို့ဖြစ်သည်။ အချို့ဒေသ၌ တစ်နှစ်လျှင် မိုးရေချိန် လက်မ ၁ဝဝ ခန့်ရွာ၍ အချို့ဒေသ၌ မိုးလုံးဝ မရွာချေ။အာဖရိကတိုက်၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်သည် သစ်တောကြီး များနှင့် ခြုံပုတ်များ ထူထပ်စွာ ပေါက်ရောက်နေ၍ လေးပုံ တစ်ပုံခန့်သည် မြက်ခင်းဖြစ်ပြီးလျှင် လေးပုံတစ်ပုံမှာမူ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်သည့် ဒေသဖြစ်ကာ ကျန်လေးပုံတစ်ပုံမှာ သဲကန္တရ အတိ ဖြစ်သည်။ 
အာဖရိကသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လွတ်လပ်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားနေသော တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန် အများဆုံး နှင့် အမျိုးအစုံဆုံး ဒေသဖြစ်သည်။ အသားစား တိရိစ္ဆာန်ရိုင်းများ ဖြစ်ကြသော ခြင်္သေ့ ၊ ခွေးအ၊ ကျားသစ် မှ စ၍ အရွက်စားသတ္တဝါများ ဖြစ်ကြသော အာဖရိကကျွဲ၊ ဆင်၊ ကုလားအုပ်၊ သစ်ကုလားအုပ် စသည်တို့သည် အများပိုင် လွင်ပြင်များ ပေါ်တွင် လွတ်လပ်စွာ သွားလာ လှုပ်ရှားလျှက် ရှိကြသည်။ ထို့ပြင် အခြားသော တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ကြသော မြွေများ နှင့် မိကျောင်းများ၊ ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါများလည်း ရှိသည်။ အာဖရိကသည် ရေခဲခေတ်က သတ္တဝါများ အစုလိုက် အပြုံလိုက် မျိုးသုဉ်းခြင်းတွင် အနည်းငယ်မျှသာ ထိခိုက်မှု ရှိခဲ့သည်။
အာဖရိကတွင် သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ပေါများစွာ ရှိသော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင်းရဲဆုံး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်အကျဆုံး တိုက်တစ်ခု သာ ဖြစ်လျှက် ရှိသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းအတွက် အကြောင်းတရား မြောက်များစွာ ရှိပြီး ထို အကြောင်းများထဲတွင် သေစေလောက်သော အေအိုင်ဒီအက်စ် ၊ ငှက်ဖျား အစရှိသော ရောဂါများ ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ မကြာခဏ လူ့အခွင့်အရေး အပြင်းအထန် ချိုးဖောက်မှုများကို ပြုလေ့ ရှိသော အကျင့်ပျက် ခြစားသော အစိုးရများ ရှိနေခြင်း၊ ဗဟိုမှ စီမံခန့်ခွဲမှုများ မှားယွင်းခြင်း၊ စာမတတ်မြောက်မှု အလွန်မြင့်မားနေခြင်း၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရှိနေခြင်း၊ ပြောက်ကျားတိုက်ခိုက်မှုမှ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု အထိ ရှိသော လူမျိုးစု ပဋိပက္ခ နှင့် စစ်ပွဲများရှိနေခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးမှု အစီရင်ခံစာအရ အောက်ဆုံး ၂၅ နိုင်ငံ (၁၅၁ မှ ၁၇၅ အထိ) မှာ အာဖရိကနိုင်ငံများ ဖြစ်နေသည်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ စာမတတ်မှု၊ အာဟာရ ချို့တဲ့မှု၊ ရေရရှိရေး နှင့် ရေပေးဝေမှု မလုံလောက်မှု တို့အပြင် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှုကလည်း အာဖရိကတိုက်တွင် နေထိုင်သော လူအများစုအား ထိခိုက် စေသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်း အသစ်ဖြစ်သော တစ်နေ့လျှင် ၁.၂၅ ဒေါ်လာ ဝင်ငွေ (ယခင်က ဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်းမှာ တစ်နေ့လျှင် ၁ ဒေါ်လာ ဝင်ငွေဖြစ်သည်။) ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲမွဲတေခြင်း ခန့်မှန်းချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ဆာဟာရတောင်ပိုင်း လူဦးရေ၏ ၈၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် စာရင်းအရ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂.၅ ဒေါ်လာ အောက်တွင် နေထိုင်လျှက် ရှိကြပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ မှ ၈၅.၇ ရာခိုင်နှုန်း နောက်တွင် ရှိသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ် အတွင်း အာဖရိက၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းမှာ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပျမ်းမျှ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အချို့သော နိုင်ငံများမှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း ပို၍ မြင့်မားပြီး အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၊ ဆူဒန်နိုင်ငံ နှင် အီကွေတာဂီနီ နိုင်ငံတို့မှာ မှတ်သားလောက်ဖွယ် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထိုနိုင်ငံ ၃ခုမှာ ဓာတ်ဆီ ထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် ရေနံထုတ်လုပ်မှုကို လတ်တလော စတင်ခဲ့သော နိုင်ငံများ ဖြစ်သည်။ အာဖရိကတိုက်တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကိုဘော့သတ္တု ၉၀ % ၊ ပလက်တီနမ် ၉၀ % ၊ ရွှေ ၅၀ % ၊ ခရိုမီယမ် ၉၈ % ၊ တန်တလိုက် ၇၀ % ၊ မက်ဂနိစ် ၆၄% နှင့် ယူရေနီယမ် ၃ပုံ ၁ပုံ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း ထုတ်လုပ်ရာတွင် သန့်စင် အသုံးပြုရသော ကိုလ်တန် ၇၀% မျှ ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စိန် ၏ ၃၀ % မျှ ရှိသည်။ ဂီနီနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘောက်ဆိုက် တင်ပို့မှု အများဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အာဖရိက၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေမခံဘဲ ဝန်ဆောင်မှုကို အခြေခံသဖြင့် အလုပ်အကိုင် မဖန်တီးပေးသော ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို လျှော့ချမပေးသော ဖွံ့ဖြိုးမှုပင် ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ၂၀၀၈ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်၏ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ၂၀၀၈ အစားအသောက် လုံခြုံမှု ကပ်ကြောင့် သန်း ၁၀၀ ကျော်သော လူတို့အတွက် အစားအသောက်ကို အာမခံချက် မရှိ ဖြစ်သွားစေခဲ့သည်။
အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်း အာဖရိကသို့ အလည်အပတ် လာရောက်စဉ်က အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇ ဘီလီယံ အကုန်ခံ၍ အာဖရိက၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ် နှင့် အာဖရိက နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပိုမို၍ တွဲဖက် အလုပ်လုပ်ရန် အစီအစဉ်ကို ကြေငြာခဲ့သည်။ အာဖရိက ကုန်သွယ်ရေး ဟုခေါ်သော အာဖရိကတိုက်အတွင်းကုန်သွယ်မှု တိုးမြှင့်ရေး နှင့် အာဖရိကတိုက်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အကြား ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ရေး အစီအစဉ်ကိုလည်း အိုဘားမားက ကြေငြာခဲ့သည်။
နိုင်ဂါ-ကွန်ဂို ဘာသာစကား မိသားစု၏ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သော ဘန်တူ စကားပြောသော လူမျိုးမှာ အာဖရိတောင်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့တွင် အဓိကနေထိုင်ကြသည်။ အနောက်အာဖရိကမှ ဘန်တူစကားပြောသော လူမျိုးများမှာ ဆာဟာရ တောင်ပိုင်းဒေသ အများအပြားသို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိလာလျှက် ရှိသည်။ သို့သော်လည်း တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ နှင့် အရှေ့အာဖရိကတို့တွင် အချို့သော နိုင်း လူမျိုးများ ရှိပြီး ဆွာဟီလီ ကမ်းရိုးတန်းတွင် ဆွာဟီလီ လူမျိုးများ ရှိကာ အာဖရိက ရှေးဦးလူမျိုးများ ဖြစ်သော ခွိုင်ဆန် (ဆန် သို့မဟုတ် ခြုံပုတ်နေလူမျိုး) နှင့် ပစ်ဂမီ လူမျိုး များကို အာဖရိက အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းတို့တွင် အသီးသီး တွေ့ရလေ့ ရှိသည်။ ဘန်တူ စကားပြောသော အာဖရိကလူမျိုးများကို ဂါဘွန်နိုင်ငံ နှင့် ဂီနီနိုင်ငံ အီကွေတာဒေသတို့တွင်လည်း တွေ့ရလေ့ ရှိပြီး ကင်မရွန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း အချို့ ဒေသများတွင်လည်း တွေ့ရသည်။ တောင်အာဖရိကရှိ ကာလာဟာရီ သဲကန္တာရတွင်မူ ခွိုင်ဆန်တို့နှင့် အမျိုးအနွယ်ချင်း နီးစပ်သော်လည်း ကွဲပြားခြားနားသော ခြုံပုတ် လူမျိုးများမှာ ကာလရှည်ကြာ နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။ ဆန်လူမျိုးများမှာ အခြားသော အာဖရိကရှိ လူမျိုးများနှင့် ပုံပန်းသဏ္ဌန်အားဖြင့် သိသာစွာ ကွဲပြားခြားနားပြီး အာဖရိကတွင် ရှေးဦးကပင် နေထိုင်လာခဲ့သော လူမျိုးများ ဖြစ်သည်။ ပစ်ဂမီလူမျိုးများမှာမူ အာဖရိကအလယ်ပိုင်းတွင် ဘန်တူလူမျိုးများ မတိုင်ခင်ကတည်းက ရှိခဲ့သော ရှေးဦးလူမျိုးများ ဖြစ်သည်။
မြောက်အာဖရိကရှိ လူမျိုးများတွင်မူ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ဘာဘာလူမျိုး၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် အီဂျစ်လူမျိုး နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် နိုင်း-ဆာဟာရ စကားပြောသော လူမျိုး စသည့်ဖြင့် ရှေးဦးလူမျိုးစု ၃ မျိုးကို အဓိကတွေ့ရသည်။ ၇ ရာစုတွင် ရောက်ရှိခဲ့သော အာရပ်လူမျိုးတို့က အာရပ်ဘာသာစကား နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာတို့ကို မြောက်အာဖရိကနှင့် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကာသေ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သော ဂျူးအနွယ်ဝင် ဖိုနီးရှား လူမျိုးများ နှင့် ဟစ်ဆော့လူမျိုးများ၊ အင်ဒို-အီရန် အနွယ်ဝင် အလန် လူမျိုးများ၊ အင်ဒို-ဥရောပ အနွယ်ဝင် ဂရိလူမျိုးများ၊ ရောမ လူမျိုးများ၊ ဗန်ဒယ် လူမျိုးများမှာလည်း မြောက်အာဖရိကတွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဘာဘာလူမျိုးစုများမှာ ၂၁ ရာစု အထိတိုင်အောင်ပင် မော်ရိုကိုနိုင်ငံ နှင့် အယ်လ်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံတို့တွင် အထင်အရှား ရှိသော်လည်း အရေအတွက် အားဖြင့် နည်းပါးသည်။ ဘာဘာစကားပြောသော လူမျိုးများကို တူနီးရှားနိုင်ငံ နှင့် လစ်ဗျားနိုင်ငံ အချို့ဒေသများ တွင်လည်း တွေ့ရသည်။ ဘာဘာစကားပြောသော တွားရက် လူမျိုး နှင့် အခြား ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသော လူမျိုးများမှာ မြောက်အာဖရိကရှိ ဆာဟာရဒေသတွင် အဓိကနေထိုင်သော လူမျိုးများ ရှိသည်။ မောရစ်ရှားနားနိုင်ငံ တွင်မူ အရွယ်အစားအားဖြင့် သေးငယ်ပြီး မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး ဖြစ်သော ဘာဘာလူမျိုးများကို မြောက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရပြီး နိုင်ဂါ-ကွန်ဂို လူမျိုးများကို တောင်ပိုင်းတွင် တွေ့ရသော်လည်း ထိုဒေသ နှစ်ခုစလုံးတွင် အာရပ်ဘာသာစကား နှင့် အာရပ်ယဉ်ကျေးမှုမှာ အထင်အရှား လွှမ်းမိုးထားသည်။ ဆူဒန်နိုင်ငံတွင်မူ အာရပ်ဘာသာစကား နှင့် အာရပ် ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးသော်လည်း ယခင်က နိုင်း-ဆာဟာရ ဘာသာစကား ပြောကြားခဲ့ကြသော နျူဘီယံ၊ ဖား၊ မာဆာလစ် နှင့် ဇာဂါဝါ လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာ အတွင်း အာရပ်ကျွန်းဆွယ်မှ ပြောင်းရွှေ့လာသူများ နှင့် ရောနှောလျှက် ရှိသည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံ နှင့် ဆူဒန်နိုင်ငံတို့တွင် အာဖရိက-အာရှ စကားပြောပြီး လှည့်လည်သွားလာလေ့ ရှိသော ဘီဂျာ လူမျိုးများကို တွေ့ရသည်။
ခွိုင်ဆန် ဘာသာစကားတွင် ဘာသာစကား အမျိုး ၅၀ ခန့် ပါဝင်ပြီး အာဖရိကတောင်ပိုင်းရှိ လူဦးရေ ၁ သိန်း ၂ သောင်းခန့် အသုံးပြု လျှက် ရှိကြသည်။ ခွိုင်ဆန် ဘာသာစကား အများအပြားမှာ ပျောက်ကွယ်လု နီးပါး ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ခွိုင် နှင့် ဆန် လူမျိုးတို့သည် ထို အာဖရိက ဒေသ၏ မူလ အစနေထိုင်သော လူမျိုးများ ဖြစ်သည်။
ကိုလိုနီ စနစ် ပျက်သုဉ်းပြီးချိန်တွင် အာဖရိက နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုပင် အာဖရိကတိုက် အပြင်ဘက်ရှိ ဘာသာစကား တစ်မျိုးမျိုးကို ရုံးသုံးဘာသာစကား အဖြစ် သတ်မှတ် သုံးစွဲကြသည်။ အချို့သော နိုင်ငံများမှာ ရှေးဦး ဘာသာစကားများ ဖြ်စသော ဆွာဟီလီ၊ ရောယူဘာ၊ အစ်ဂ်ဘို၊ ဟောဆာ အစရှိသော ဘာသာစကားများကို တရားဝင် အသိမှတ်ပြု ထားသည်။ နိုင်ငံ အများအပြားတွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာ နှင့် ပြင်သစ် ဘာသာစကားတို့ကို အများနှင့် ဆိုင်သော နေရာများ ဖြစ်သည့် အစိုးရ၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး နှင့် ပြန်ကြားရေး တို့တွင် ဆက်သွယ်ရန် အသုံးပြုကြသည်။ အာရပ်ဘာသာစကား၊ စပိန်ဘာသာစကား၊ အာဖရိကန် ဘာသာစကား နှင့် ပေါ်တူဂီ ဘာသာစကားတို့မှာ အာဖရိကတိုက် အပြင်မှ မြစ်ဖျားခံလာသော ဘာသာစကားများ ဖြစ်သော်လည်း အာဖရိကသား သန်းပေါင်းများစွာတို့က အများနှင့် ဆိုင်သော နေရာ သို့မဟုတ် မိမိတို့ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရန် အသုံးပြုလျှက် ရှိကြသည်။ ယခင်က အီတလီ၏ ကိုလိုနီ ဖြစ်ခဲ့သော ဒေသများတွင် အီတလီ ဘာသာစကားကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။ ဂျာမနီ၏ ယခင် ပိုင်နက် ဖြစ်သော နမီးဘီးယားနိုင်ငံတွင် ဂျာမန်ဘာသာစကားကိုလည်း ပြောဆိုကြသည်။
အချို့သော အာဖရိက ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အစိတ်အပိုင်း များမှာ ယခုလတ်တလောတွင် ကျင့်သုံးမှုနည်းပြီး ကိုလိုနီခေတ်နှင့် ကိုလိုနီခေတ်လွန် အစိုးရများ၏ လျစ်လျူရှုမှု နှင့် ဖိနှိပ်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုအခါတွင် အာဖရိက၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို ပြန်လည်ရှာဖွေခြင်း နှင့် တန်ဖိုးထားခြင်းတို့ ဖြစ်လာစေရန် ကြိုးစားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ တောင်အာဖရိက သမ္မတဟောင်း တက်ဘို အမ်ဘပ်ကီ ဦးဆောင်သော အာဖရိက ရီနေဆွန်း လှုပ်ရှားမှု နှင့် မိုလ်ဖီ အဆန်တီ အပါအဝင် ပညာရှင် တစ်စု ဦး ဆောင်သော အာဖရိုဆန်ထရစ်ဆင် လှုပ်ရှားမှုတို့ က ထိုသို့ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ရိုးရာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ပြီး ဗူဒူး အပါအဝင် အခြား ယုံကြည်မှုများကို ရာဇဝတ်မှု အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ယခု လတ်တလော နှစ်များတွင် အာဖရိက ယဉ်ကျေးမှုသည် ကျေးလက်ဆင်းရဲမွဲတေမှု နှင့် အနည်းငယ်မျှသော စိုက်ပျိုးမှုတို့နှင့် တွဲဆက်လျှက် ရှိသည်။
Jacobs, Louis L. (1997). "African Dinosaurs." Encyclopedia of Dinosaurs. Edited by Phillip J. Currie and Kevin Padian. Academic Press. pp. 2–4.
Genetic study roots humans in Africa, BBC News | SCI/TECH
Migration of Early Humans From Africa Aided By Wet Weather, sciencedaily.com
Ivan van Sertima (1995) Egypt: Child of Africa/S V12 (Ppr), Transaction Publishers. pp. 324–325. ISBN 1-56000-792-3.
Martin and O'Meara. "Africa, 3rd Ed." Indiana: Indiana University Press, 1995. Archived 11 October 2007 at the Wayback Machine.
Were Egyptians the first scribes?, BBC News | Sci/Tech
Shavit၊ Jacob; Shavit၊ Yaacov (2001)။ History in Black: African-Americans in Search of an Ancient Past။ Taylor & Francis။ p. 77။ ISBN 0-714-68216-0။
Fage, J. D. (1979) The Cambridge History of Africa, Cambridge University Press. ISBN 0-521-21592-7.
Fage, J. D., et al (1986) The Cambridge History of Africa, Cambridge University Press. Vol. 2, p. 118.
Oliver, Roland and Anthony Atmore. (1994) Africa Since 1800, Cambridge University Press. ISBN 0-521-42970-6.
Ptolemaic and Roman Egypt: 332 BC-395 AD။ Wsu.edu (1999-06-06)။ 28 May 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-05-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Ayoub၊ Mahmoud M. (2004)။ Islam: Faith and History။ Oxford: Oneworld။ pp. 76, 92–3, 96–7။
Apley၊ Apley။ Igbo-Ukwu (ca. 9th century)။ The Metropolitan Museum of Art။ 2008-11-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Meredith၊ Martin။ "The Fate of Africa – A Survey of Fifty Years of Independence"၊ washingtonpost.com၊ January 20, 2006။ 2007-07-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Igbo-Ukwu (ca. 9th century) | Thematic Essay | Heilbrunn Timeline of Art History | The Metropolitan Museum of Art။ Metmuseum.org။ 2010-05-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Mauritania – Arab invasions". Library of Congress Country Studies.
Genetic Evidence for the Expansion of Arabian Tribes into the Southern Levant and North Africa။ Pubmedcentral.nih.gov (2010-04-01)။ 2010-05-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Historical survey > Slave societies, Encyclopædia Britannica
Swahili Coast Archived6December 2007 at the Wayback Machine., National Geographic
Welcome to Encyclopædia Britannica's Guide to Black History, Encyclopædia Britannica
Focus on the slave trade, BBC
The West African Squadron and slave trade။ Pdavis.nl။ 2010-05-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Lucien Bély, History of France. Editions Jean-paul Gisserot. 2001. page 118
Ernest Aryeetey, Jane Harrigan and Machiko Nissanke, Economic reforms in Ghana : the miracle and the mirage. Africa World Press. 2000. page 5
"BBC: 1984 famine in Ethiopia"၊ BBC News၊ 2000-04-06။ 2010-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Drysdale, Alasdair and Gerald H. Blake. (1985) The Middle East and North Africa, Oxford University Press US. ISBN 0-19-503538-0.
Atlas - Xpeditions @ nationalgeographic.com။ National Geographic Society (2003)။ 2009-03-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Lewin, Evans. (1924) Africa, Clarendon press.
(1998) Merriam-Webster's Geographical Dictionary (Index), Merriam-Webster. pp. 10–11. ISBN 0-87779-546-0.
"Africa: Environmental Atlas, 06/17/08." Archived5January 2012 at the Wayback Machine. African Studies Center, University of Pennsylvania. Accessed June 2011.
Thabo Mbeki (9 July 2002)။ Launch of the African Union,9July 2002: Address by the chairperson of the AU, President Thabo Mbeki။ africa-union.org။3May 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-02-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The developing world is poorer than we thought, but no less successful in the fight against poverty။ World Bank။ 23 March 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Economic report on Africa 2004: unlocking Africa's potential in the global economy (Substantive session 28 June-23 July 2004), United Nations.
Neo-Liberalism and the Economic and Political Future of Africa။ Globalpolitician.com (2005-12-19)။ 31 January 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-05-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Number of the Poor Increasing Worldwide while Sub-Saharan Africa is the Worst of All။ Turkish Weekly (2008-08-29)။ 24 September 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2011-11-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"DR Congo poll crucial for Africa". BBC News. November 16, 2006.
"China tightens grip on Africa with $4.4bn lifeline for Guinea junta". The Times. October 13, 2009.
"The African Decade?". Ilmas Futehally. Strategic Foresight Group.
Malia Politzer, "China and Africa: Stronger Economic Ties Mean More Migration", Migration Information Source. August 2008.
"Africa Can Feed Itself inaGeneration, Experts Say", Science Daily, December 3, 2010.
Olga Khazan (3 July 2013)။ The three reasons why the US is so interested in Africa right now။ Quartz။ Quartz။4July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Africa Population Dynamics။
Population Archived 17 December 2000 at the Wayback Machine.. Western Kentucky University.
Africa's population to double to 2.4 billion by 2050. The Daily Telegraph. September 12, 2013.
Luc-Normand Tellier (2009). "Urban world history: an economic and geographical perspective". PUQ. p. 204. ISBN 2-7605-1588-5
"Pygmies struggle to survive in war zone where abuse is routine". Times Online. December 16, 2004.
"Q&A: The Berbers"၊ 12 March 2004။ 30 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"We Want Our Country" (3 of 10). Time, November 5, 1965.
Raimondo Cagiano De Azevedo (1994). "Migration and development co-operation.". Council of Europe, p. 25. ISBN 92-871-2611-9
"Jungle Shipwreck". Time. July 25, 1960.
"Flight from Angola", The Economist , August 16, 1975.
Holm၊ John A. (1989)။ Pidgins and Creoles: References survey။ Cambridge University Press။ p. 394။ ISBN 0-521-35940-6။
"Naomi Schwarz, "Lebanese Immigrants Boost West African Commerce" Archived 24 December 2011 at the Wayback Machine., VOANews.com, July 10, 2007.
Africa။ UNESCO (2005)။2June 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-03-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
[uite101.com/article/african-cup-of-nations-football-competition-winners-list-a262598 African Cup of Nations Football Competition Winners List (suite101.com)]
"African Religion on the Internet", Stanford University
Onishi၊ Normitsu။ "Rising Muslim Power in Africa Causing Unrest in Nigeria and Elsewhere"၊ The New York Times၊ November 1, 2001။ 2009-03-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hans Kung, Tracing the Way : Spiritual Dimensions of the World Religions. Continuum International Publishing Group. 2006. page 248
Continental regions as per UN categorisations/map.
အနောက်ဆာဟာရ is disputed between the Sahrawi Arab Democratic Republic, who administeraminority of the territory, and Morocco, who occupy the remainder.
အီဂျစ်နိုင်ငံ is generally consideredatranscontinental country in Northern Africa (UN region) and Western Asia; population and area figures are for African portion only, west of the Suez Canal.
The Spanish Canary Islands, of which Las Palmas de Gran Canaria are Santa Cruz de Tenerife are co-capitals, are often considered part of Northern Africa due to their relative proximity to Morocco and Western Sahara; population and area figures are for ၂၀၀၁.
The Spanish exclave of Ceuta is surrounded on land by Morocco in Northern Africa; population and area figures are for ၂၀၀၁.
The Portuguese Madeira Islands are often considered part of Northern Africa due to their relative proximity to Morocco; population and area figures are for ၂၀၀၁.
The Spanish exclave of Melilla is surrounded on land by Morocco in Northern Africa; population and area figures are for ၂၀၀၁.
Bloemfontein is the judicial capital of South Africa, while Cape Town is its legislative seat, and Pretoria is the country's administrative seat.
Yamoussoukro is the official capital of Côte d'Ivoire, while Abidjan is the de facto seat.